प्रविधि – Page3– Banking Khabar
डिशहोमका ग्राहकलाई खुसीको खबर : रमाईलो टिभीमा नयाँनयाँ कार्यक्रमहरु आउने
बैंकिङ खबर । डिश मिडिया नेटवर्क लि.ले नेपाली समाजका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलहरुका साथै आफैँले प्रवर्धन गरेका उत्कृष्ट च्यानलहरु प्रशारण गरिरहेको छ । डिशहोम आफैँले प्रवर्धन गरेका च्यानलहरुमध्ये पनि रमाईलो टिभिले दर्शकहरुको मन जित्न सफल भएको छ । रमाईलो टेलिभिजनमा हाल प्रशारण भईरहेका कार्यक्रमहरु जस्तै आनन्दी, जड्यौरी, लोक भाका, मेरो कथा, म्युजिक इभ,
बैंक अफ काठमाण्डू ,कुमारी बैंक र देवःविकास बैंक पनि connectIPS मा आवद्ध
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्र्घित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले संचालनमा ल्याएको connectIPS e-Payment त प्रणालीमा सोमबारबाट कारोबार शुरु गर्ने गरी बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी बैंक र देवः विकास बैंके लाई उत्त mप्रणालीमा आवद्ध गराईएको छ । बैंकका ग्राहकहरुले यस प्रणालीमार्फत आफ्नो बैंक खाताबाटअनलाईनबाटै कारोबार गर्ने सक्नेछन् । जसमा रु.
शेयर ब्रोकरको भुक्तानी पनि connect IPS e-Payment प्रणाली मार्फत
बैंकिङ खबर । शेयर कारोबारलाई अटोमेसनमा लैजान गरिएको पहललाई टेवा पुराउने उद्देश्यले शेयर ब्रोकरलाई गरिने भुक्तानी नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले संचालनमा ल्याएको connect IPS e-Payment प्रणाली मार्फत सिधै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीकर्ताहरुले शेयर खरीद गरे वापत ब्रोकरलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी www.connectips.com मा गएर आवश्यक विवरण भरी आफ्नो बैंक खाताबाट सोझै सम्बन्धित ब्रोकरको बैक खातामा
मञ्जुश्री फाईनान्स पनि कनेक्ट आईपिएसमा आवद्ध
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्र्घित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले संचालनमा ल्याएको कनेक्ट आईपिएस ईपेमेन्ट प्रणालीमा मञ्जुश्री फाईनान्स पनि आवद्ध भएको छ । फाइनान्सका ग्राहकहरुले यस प्रणाली मार्फत आफ्नो बैंक खाताबाट अनलाईन मार्फत प्रति कारोबार रु. १ लाख सम्मको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् भने मोबाईल एप्स मार्फत प्रति कारोबार रु. ५ हजार
ट्वीटरको नाफामा उल्लेख्य प्रगति, प्रयोगकर्ता किन घटे ?
बैंकिङ खबर । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरले आर्थिक बर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा अपेक्षा गरेभन्दा धेरै राम्रो नाफा र कर उठाउन सफल भएको छ । ट्वीटरको सान फ्रान्सिस्को समूहले सात अरब ८९ करोड अमेरिकी डलर नाफा गरेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा ट्वीटरले २१ करोड अमेरिकी डलरको क्षति ब्यहोरेको थियो । ट्वीटरले गरेको नाफासँगै यसको सेयर ‘प्रि
राजधानीको सुन्धारामा रहेको सिटीसी मलमा हालै संचालनमा आएको मोबाइल हबमा तिहार धमाका मोबाइल मेला सुरु भएकोे छ । मोबाइलका पारखीहरुका लागि नयाँ गन्तव्यको अवधारणा सहित हबले मोबाइल मेलामा आर्कषक छुटका साथै अफर भित्रको अफर योजना ल्याएको हो । मोवाइल सम्बन्धि सबै सेवा एकै छाना मुनी दिने र नजिकिदै गरेको दोस्रो ठूलो पर्व तिहारलाई लक्षित गरी
स्वीफ्ट के हो ? कसरी गरिन्छ प्रयोग ?
बैंकिङ खबर । अन्तर्राराष्ट्रिय कारोबार गर्नका लागि बैंकहरुले प्रयोग गर्ने सफ्टवेरलाई स्वीफ्ट भनिन्छ । स्वीफ्टको पुर्ण रुप द सोसाइटी फर वल्र्ड वाइड इन्टरबैंक टेलिकम्युनिकेसन हो । यो प्रणाली सोसाइटी फर वलफेयर अर्गनाइजेसनले बनाएको हो । एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा पैसा पठाउन यो सफ्टवेरको प्रयोग गरिन्छ सोसाइटी फर वेलफेयर अर्गनाइजेसनले बनाएको उक्त प्रणाली सुरक्षित वित्तीय कारोबारका
बैंकिङ खबर । इन्टरनेट बैंकिङ भनेको इन्टरनेट मार्फत बैंकले उपलब्ध गराउने सेवा हो । यसबाट ग्राहकले बैंकबाट प्राप्त हुने केही सुविधाहरु इन्टरनेट मार्फत आफ्नै कम्प्युटरबाट उपभोग गर्न सक्दछन् । ब्यालेन्स हेर्ने, स्टेटमेन्ट हेर्ने र प्रीन्ट गर्ने, नयाँ चेक बुकको अनुरोध गर्ने, हराएको चेक रोक्काको अनुरोध गर्ने, युटिलिटी सर्भिस लगायतका सेवा इन्टरनेट बैंकिङबाट पाइन्छ । पछिल्लो
भार्गव विकास बैंकले सुरु गर्यो मोबाईल बैकिङ्ग
बैंकिङ खबर । भार्गव विकास बैंक लिमिटेडले मोबाइल बैंकिङको सुरुवात गरेको छ । आफ्नो दशौं बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेपश्चात आइतबार बैंकले भार्गव मोबाईल बैंकिङ्ग सेवाको विधिवत रुपमा सुरुवात गरेको हो । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर थापाले भार्गव मोबाइल बैंकिङको उद्घाटन गरे । यो सेवा बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरुबाट उपलब्ध हुनेछ । यसमा मौज्दात सोधपुछ,
कैलाश विकास बैंक पनि कनेक्ट आईपिएसमा आवद्ध
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्र्घित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले संचालनमा ल्याएको कनेक्ट आईपिएस ईपेमेन्ट प्रणालीमा कैलाश विकास बैंक पनि आवद्ध भएको छ । बैंकले सोमबारबाटै उक्त कारोबार सुरु गरेको छ । बैंकका ग्राहकहरुले यस प्रणाली मार्फत आफ्नो बैंक खाताबाट प्रति कारोबार एक लाखसम्मको अनलाईन भुक्तानीहरु गर्न सक्नेछन् । यस प्रणाली
कामना सेवा विकास बैंक पनि कनेक्ट आईपिएसमा आवद्ध
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्र्घित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले संचालनमा ल्याएको कनेक्ट आईपिएस ईपेमेन्ट प्रणालीमा कामना सेवा विकास बैंकलाई आवद्ध गराएको छ । बैंकका ग्राहकहरुले यस प्रणाली मार्फत आफ्नो बैंक खाताबाट प्रति कारोबार रु. १ लाखसम्मको अनलाईन भुक्तानीहरु गर्न सक्नेछन् । यस प्रणाली मार्फत बैंकका ग्राहकहरुले www.connectips.com मा गई आफूलाई
शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक पनि कनेक्ट आईपिएसमा आवद्ध
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्र्घित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले संचालनमा ल्याएको कनेक्ट आईपिएस ईपेमेन्ट प्रणालीमा मंगलबारबाट कारोबार शुरु गर्ने गरि शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकलाई उक्त प्रणालीमा आवद्ध गराएको छ । बैंकका ग्राहकहरुले यस प्रणाली मार्फत आफ्नो बैंक खाताबाट प्रति कारोबार रु. १ लाखसम्मको अनलाईन भुक्तानीहरु गर्न सक्नेछन् । यस प्रणाली
रमाईलो टिभी एचडी र एक्सन स्पोट्र्स एचडीको बार्षिकत्सव सम्पन्न
बैंकिङ खबर । ओरिजिनल इन्टरटेनमेन्ट प्रा.लि.(ओइपिल) अन्र्तगत संचालनमा रहेका दुईवटा च्यानलहरु रमाइलो टिभी एचडी र एक्सन स्पोर्टस् एचडीले आफ्नो प्रसारणको एक बर्ष पुरा गरि दोस्रो बर्षमा प्रवेश गरेको छ । बि.सं.२०७४ साल असोज १ गते बिश्वकर्मा पूजाको पवित्र दिन पारेर यी दुई च्यानलहरु प्रसारणमा आएका थिए । मनोरञ्जन क्षेत्रलाई बिशुद्ध रुपमा प्रसारण गर्ने हेतुले संचालनमा
आईफोनको नयाँ मोडेल सार्वजनिक
कुपरटिनो । अमेरिकी स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले एकै पटक तीन किसिमका आइफोन बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । बिक्रीमा सामान्य कमी आइरहेको समयमा एप्पलले बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले नयाँ मोडलका साथै सर्बाधिक महँगा आइफोन बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टीम कूकले गत वर्ष सार्वजनिक गरिएको आइफोन एक्सभन्दा ठूलो स्क्रिन भएको आइफोन एक्सएस म्याक्स
साफकपको प्रत्यक्ष प्रशारण डिसहोमको एक्शन स्पोर्ट्स एचडिमा
बैंकिङ खबर । नेपालको पहिलो खेल सम्बन्धि च्यानल एक्सन स्पोर्ट्से नेपालीले खेल्छ, नेपालीले हेर्छ भन्ने नारा सहित हाल भईरहेको साफ सुजुकीकप २०१८ लाई पनि प्रत्यक्ष प्रशारण गरिरहेको छ । एस साफ कपमा नेपालले आफ्नो प्रदर्शनलाई निखारेको छ । जित्नै पर्ने अवस्थामा रहेको नेपालले बंगलादेश बिरुद्दको खेलमा आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गदै उसकै घरेलु मैदानमा २-० को